खोज – Page2– Nepal Parikrama
४८ सालको ११ करोड निर्वाचन खर्च ७४ मा आइपुग्दा ११ अर्वमा पुग्यो
काठमाडौं– पहिलो जनआन्दोलन संस्थागत गर्न २०४८ सालमा भएको चुनावमा जम्मा११ करोड खर्च भएको थियो भने २०५६ सालको आम निर्वाचनमा जम्मा ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०४८ देखि ७४ सम्मको २६ बर्षे अवधिमा चुनावी खर्च १० अर्व भन्दा माथि पुगेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा जम्मा २ अर्व ५० करोड खर्च भएको थियो भने २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ४ अर्व २६ करोड मात्र खर्च भएको थियो । यसै बर्ष सम
ठमेल र दरबार मार्ग आसपासमा डान्सबारका नाममा लुटै लुट, भाग्न खोज्नेलाई छैन छूट
काठमाडौं– ठमेल र दरबारमार्ग आसपासका केही डान्सबारले सर्वसाधारण लुट्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । रातिको समयमा ठेमल आसपास पुग्ने कतिपय व्यक्ति यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका केही डान्सबार बाट लुटिने गरेका छन् । ठमेलको बाटो भएर हिड्ने, काठमाडौं बाहिरबाट आउने र विदेशबाट आउनेहरूलाई रेष्टुरेन्टमा केटी मिलाइने प्रलोभन देखाई केही डान्सबारहरूले लुटको धन्दा गरिरहेका छन् । अन्य डान्सबारमा जान आउनेलाई समेत आफ्न
यो कस्तो चाला ? आयोगमा गाडी हुँदा हुँदै निर्वाचन आयुक्तले किने फेरी १५ करोडका गाडी
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले पाँच जना आयुक्तका लागि भन्दै झण्डै १५ करोड मूल्य बराबरका ५ वटा विलासी गाडी गरिद गरेको छ । आयोगले खरिद गरेका गाडी विहीबार निर्वाचन आयोगको कार्यालय ल्याइएको हो । आयुक्तका लागि भन्दै खर्च भएको यो रकम यदि भूकम्पबाट आफ्नो घर पूर्ण रूपमा क्षति भएकालाई ५० हजारका दरले दिने हो भनेपनि ३ हजार घर परिवारलाई पुग्छ । २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो चुनाव र यसै बर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय त
यस्तो छ सरकारी बदमासी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा करोडौंको घोटाला
काठमाडौं– २०७३ जेठ १७ गते, यातायात व्यवस्था विभागले बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गर्‍यो । सोही अनुरुप भदौ ५ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम समेत सुरु भइसकेको छ । तर, ठेक्का प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोधका आवाज सुनिन थालेको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको चरम ढिलासुस्ती
काठमाडौं– २७ महिना बित्यो भूकम्प पीडितले न्युनतम आवास खोजेको । यस बीचमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । उनिहरुले भूकम्प पीडितलाई तत्काल बासको व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्ति पनि गरे । तर काम भने उपलब्धिमूलक हुन सकेन । सरकार मात्र होइन प्रतिबद्धता गर्ने काम नगर्ने सूचीमा एनजिओ/आइएनजिओहरु पनि छन् । तर उनीहरुबाट पनि अपेक्षीत उपलब्धि हात पर्न सकेन ।
साइबर क्राइमका घटना बढ्दै
काठमाडौं– सूचना र प्रविधिमा पहुँच विस्तार भएसँगै नेपालमा विद्युतिय अपराधका घटना पनि बढिरहेका छन् । पछिल्लो समय बिधुतीय अपराध अन्तर्गत फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सन्जालबाट धम्की दिने, गाली–गलौज गर्ने, बैंक एटीएमको पिन, न्यूज पोर्टल, फ्यानपेज ह्याक गर्नेदेखि देखी फोटो जोडेर चरित्र हत्या गर्नेसम्मका अपराधहरु बढ्दै गएका छन्् । पछिल्लो समय प्रविधि दुरूपयोग गरी अपराध गर्नेक्रम बढे पनि कारवाहीको दायराम
स्पाम कल आउँदा होसियार
काठमाडौं– तपाईंको मोबाइलमा नचिनेको नम्बरबाट ‘मिस्ड कल’ आइरहेको छ ? यसो हो भने होसियार हुनुहोस् । नचिनेको नम्बरबाट आएको ‘मिस्ड कल’मा ‘कल ब्याक’ गर्दा तपाईंको मोबाइलको गोप्य सूचना चोरिनुका साथै ब्यालेन्स पनि रित्तिन सक्छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलका मोबाइल बोक्ने कतिपय ग्राहकको मोबाइलमा विदेशको नम्बरबाट मिस्ड कल आएर हैरान हुने गरेको छ । पटक–पटक आउने मिस्ड कलमा कल व्याक गर्दा मोबाइलमा रहेको व्यालेन्स नै
सूचना प्रविधिको विकास भएसँगै हुलाक सेवा संकटमा
काठमाडौं– केन्द्रदेखी गाबिस स्तरसम्म संरचना बिस्तार गरेर बि.स. १९३५ देखि सेवा दिँदै आएको हुलाक सेवा मोबाईल र ईमेल ईन्टरनेटको बिकास तथा प्रविधिको विकाससंगै संकटमा परेको छ । वार्षिक१० हजारसम्म चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने गरेको हुलाक सेवा अहिले ३५ सय जति मात्रै चिठी आदान प्रदान हुन थालेको छ । चिठी आदान प्रदानको शैलीमा परिवर्तन आएकाले अधिकांस हुलाक सुनसान बनेको हुलाकका कर्मचारी बताउंछन । प्रविधिको वि
सर्वसाधारणको सुविधामा गैर जिम्मेवार सरकार, किन हटे रात्रि बस ?
काठमाडौं–सर्वसाधारणको सुविधाको लागि भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले २०६९ साल भदौ १ गतेबाट रात्रिकालिन बस सेवा शुरू गर्‍यो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको ३० लाख रूपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिको १५ लाख रूपैयाँ सहयोगमा रात्रि बस सञ्चालनमा आएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल यातयात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघवीच शुरूको ६ महिना काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोग र पछि व्यवसायी आफैले चलाउने सहमति भई रात्रि काल
नेपालीलाई खुसीको खबर, आर्थिक बृद्धि २७ बर्षकै उच्च
काठमाडौं– चालु आर्थिक बर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बृद्धिका सबै सूचाङ्कमा उत्साहजकम प्रगति भएको हो । खासगरी चालु आर्थिक बर्षमा मौसम अनुकूल भई कृषि उत्पादन बढ्नु, विद्युत कटौती कम हुँदा औधोगिक उत्पादन बढ्नु जस्ता कारणले आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक इश्वरीप्रसाद भण्डारील
१२ सय ७ जनामा संक्रमण पुष्टी, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ७२४, थप ८ जनाको मृत्यु
थप १ हजार ३ सय १३ जनामा संक्रमण पुष्टी, संक्रमितको संख्या ७० हजार नाघ्यो
एकै दिन १४ सय ९७ जनामा संक्रमण पुष्टी, १७ जनाको मृत्यु, निको हुनेको संख्या ५० हजार नाघ्यो
२५ हजार सक्रिय संक्रमितको संख्या भएमा फेरी लकडाउन गर्न मन्त्रालयको सिफारिस
थप ११ सय ७२ जनामा संक्रमित पुष्टी, ७ जनाको मृत्यु